Fur jeestay kaliya caag, dayashada kaliya seed dibi, duritaanka doorsoon kaliya - Aonaibao
Taageerada Call +86 18264680815
Fur jeestay kaliya caag
Dayashada kaliya seed dibi
Duro kaliya doorsoon
dibi dayashada seed kaliya 02
dibi dayashada seed kaliya 01
Fur jeestay kaliya caag 06
Fur jeestay kaliya caag 05
Fur jeestay kaliya caag 04
Fur jeestay kaliya caag 03
Fur jeestay kaliya caag 02
Fur jeestay kaliya caag 01
Wax walba waa ka barta of view of badbaadada-soo-saarka, waxaan isku daynaa in aan u adeego shaqaalaha.
magaalada Shandong Gaomi Onaibao Ilaalinta Shaqaalaha Products Factory waa-soo-saarka iyo iibinta xirfad ganacsi ka mid ah kabaha ammaanka. Aasaasay sannadkii 1986, shirkadda ku yaal aaga horumarinta bariga magaalada Gaomi in Shandong Peninsula agglomeration magaalooyinka gaadiidka horumaray. Waxay leedahay workshop-soo-saarka ah oo daboolaya aag of 8000 mitir oo laba jibbaaran, gaadiid ku haboon iyo logistics horumariyo. Waa 10km saldhigga tariinka, 50km garoonka Qingdao oo 80km ka dekedda Qingdao. badeecada waxaa loo iibiyey in gobollada kala duwan.
dibi dayashada seed kaliya 03
Nadiifinta iyo Dayactirka Nubuck Leathe ...
maqaar Nubuck waa wax kabaha laga heli by daaweynta meged ahna u soo bandhigaan marada nidaamsan iyo labis of maqaar ka dibna u dyeing ah, maxaa yeelay, texture jilicsan dadka siinaysaa dareen qaro weyn oo diiran oo ka dhigaysa wax kabaha this inta badan lagu arko on kabaha qabowga. maqaar nubuck ee kabaha ammaanka ...
Doorashada noocyada kabaha ammaanka
kabaha Ammaanka, sidoo kale loo yaqaan kabaha ammaanka, tixraac kabaha loo gashado ee goobaha shaqada oo kala duwan ama u baahan tahay in cagta iyo lugta dhaawac noocyada gaarka ah qaar ka mid ah shaqada loo ilaaliyo. kabaha ammaanka waxaa lagu si xun ugu qaybin karaa afar qaybood. Sida laga soo xigtay warshado kala duwan, noocyada kala duwan ee Safet ...
Cinwaankaaga: Xiao tuulada Nan'qu, Horumarinta Zone, Gaomi City, Gobolka Shandong, Shiinaha